Moe Kai: အဖြေမှန် မရှိသော ပု စ္ဆာများ
ဒီအားကစား ဆရာဝန် အလုပ် အင်တာဗျူးမှာ အမေးခံခဲ့ ရတာကတော့ -ဘက်စကက်ဘော အားကစားသမား တယောက်က နင့်ဆီကိုလာပြီး သူ.ရဲ. ဆရာဝန် အဖြစ်နဲ. ယုံယုံကြည်ကြည် လာပြောတယ်။ “သူက ဒီပွဲကို နုိုင်ချင်လွန်းလို. တားမြစ်ဆေးတွေ သုံးထားမိတယ်။ ဒါကို သူ.ရဲ့ နည်းပြကိုလဲ မပြောပါနဲ.။ တာဝန်ရှိသူတွေ ဆေးလာစစ်ရင်လဲ သူအောင်အောင် လုပ်ပေးပါ” တဲ့။ အဲဒီတော့ အားကစားသမားကို ရှင်းပြရတာက ကိုယ်က အသင်းရဲ့ ဆရာဝန် ဖြစ်တိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ အားကစား သမားကို ဆေးအောင်အောင် လုပ်ပေးလို. မရပါဘူး။ တားမြစ်ဆေးတွေ သုံးပြီး ကစားတယ် ဆိုတာ အလွန်မှားယွင်းကြောင်းနဲ. မိဖို.လဲ အလွန်သေချာသလောက် ရှိကြောင်း။ ဒါကြောင့် ဆက်မကစားသင့်ကြောင်းကိုလဲ နာလည်အောင် ပြောပြရပါတယ်။ ဒါကို အားကစားသမားက လက်မခံ။ ဒီပွဲမှာ အတင်း ကစားမှာဘဲ လုပ်ပါတယ်။ ကဲအဲဒီတော့ နောက်တဆင့်က သူ.အကြောင်း နည်းပြကို ပြောပြီး သူ.ကို အသင်းထဲက ထုတ်ပယ်ခုိုင်းရမလား။ ဒီလို ဆိုရင် အားကစား သမားတွေရဲ့ ဆရာဝန် အပေါ် ယုံကြည်ချက်က ပျက်ပေတော့မယ်။ ကိုယ်က မပြောပြန်ရင်လဲ ကိုယ့်အသင်း ပထမဆွဲပြီး အသင်းသားတွေ ဆေးစစ်ခံရရင် ဒီတားမြစ်ဆေးကိစ္စပေါ်ပြီး အသင်းတခုလုံးရထားတဲ့ ဆုကို ပြန်အပ်ရမယ့် အပြင် အသင်း နာမည်ပျက် ရတော့မယ်။ အသင်းတခုလုံး နောင်နှစ်တွေပါ Disqualify အလုပ်ခံရင် ခံရနိုင်ပါတယ်။ အသင်းတခုလုံး ကိုယ့်ကြောင့် နစ်နာရတော့မယ်။ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရပါ့မလဲ ??
ဒါတွေ တွေးမိလာတာက ဒီနေ.ဆေးရုံမှာ နှလုံးအားနည်းပြီး အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ကျမတို. အခေါ် Heart failure လူနာ တယောက်နဲ. ဆုံရပါတယ်။ Heart failure က သူမရဲ့ ဝမှာစိုးလို. ဘာအစားမှ မစားတဲ့ Anorexia narvosa လုို.ခေါ်တဲ့ ရောဂါ ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်လို. အားလုံးက ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာတော့ အစားအရမ်းရှောင်တဲ့ မိခင်ကြောင့် ကလေးမှာ အာဟာရ မပြည့်ဝဘဲ Beri Beri လို.ခေါ်တဲ့ ရောဂါရတာမျိုးပါ။ ကလေးတွေ အမောဖောက်ပြီး ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နဲ. ဆေးရုံ ရောက်လာတတ် ကြပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် B1 ချို.တဲ့ပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ကုထုံးကလဲ (မြန်မာနုိုင်ငံမှာတုန်းကတော့) ရှင်းရှင်းရယ်။ တွေ.တဲ့ ဖမ်းမိတဲ့ သွေးကြောထဲ ဗိုက်တာမင်ဘီ(၁) ဆေးသွင်းပေးလုိုက်ရင် ကလေးအများစုဟာ မိနစ် စက္ကန်. အတွင်းကို ပြန်ကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ဒီလိုမဟုတ် ဒီလူနာက စိတ်ရောဂါနဲ. ဆိုတော့ ဆေးသွင်းတာ လုံးဝ လက်မခံ။ သူမ ဝလာမှာ စိုးလို.တဲ့။ တခြား ဘာဆေးမှလဲ မသောက်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လို လုပ်ကြမတုန်း။ ကုရင်လွယ်တဲ့ ကိစ္စ အကုမခံတော့ အတော် ရှုပ်သပေါ့။ အတင်းဘဲ ချုပ်နှောင် ဆေးအတင်း ထိုးပစ်ရလေမလား။ ဒါမှမဟုတ် သူဘာသာသူ သေချင်သေပေါ့။ ငါ့စကား ဒင်းမှ နားမထောင်ချင်တာ ဆိုပြီး မျက်ကွယ် ပြုပြစ် လိုက်ရမလား။ ခက်တော့ ခက်ပါသေးတော့သည် .....။